LEGO CON တွင်သင်မြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်
06 / 06 / 2021 06 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 954 Views စာ0မှတ်ချက် City, သဘောတူညီချက်, အဖြစ်အပျက်, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego, Lego CIty, Lego Con, Lego CON 2021, LEGO ကွန်ဗင်းရှင်း, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Minecraft, Lego Star Wars, Lego စူပါမာရီယို, Lego Technic, Minecraft, Star Wars, စူပါမာရီယို, နည်းပညာ
ကျနော်တို့လာမည့်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်အရာကို၏ပထမ ဦး ဆုံးသတင်းအချက်အလက် Lego CON အဖြစ်အပျက်ကိုဖော်ထုတ်ထားသည့်အပိုင်းများပါဝင်သည် Minecraft, စူပါမာရီယို နှင့်ပိုပြီး။
အဆိုပါ Lego သူတို့အုပ်စုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရသည် ပထမ ဦး ဆုံးအ Lego CON ဒီလနှောင်းပိုင်းမှာ၊ တွစ်တာမှာအချိန်ဇယားအတိုင်းလှောင်ပြောင်ခံရသည်။ ဒီဟာကဒစ်ဂျစ်တယ်အဖြစ်အပျက်မှာကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်တဲ့အရာအချို့ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။
ခြောက်ခွက်ပါသည့်ရုပ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်အပျက်သို့လာမည့်အရာအားလုံးကိုပြသနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အနည်းဆုံးအတည်ပြုသည် Minecraft Mojang မှ guest ည့်သည် Lydia Winters နှင့်အတူဒီဇိုင်း Q & A အပြင် ယခင်က teased Lego Star Wars set ကိုထုတ်ဖေါ်။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးအရာရှိဖြစ်သောလာမည့်အရာ၏ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်သည် #လီဂွန်ကွန်! အွန်လိုင်းမှာဇွန် ၂၆ ရက်မှာ online ကိုဆက်သွယ်ပါ https://t.co/2JrJOQ2MEY ? pic.twitter.com/dMMLU6dncm
- Lego (@LEGO_Group) ဇြန္လ 6, 2021
Lego စူပါမာရီယို 'နောက်ဆုံးပေါ်အစုံများကိုပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ခြင်း' အဖြစ်ဖော်ပြထားသည် Luigi St နှင့်အတူ 71387 Adventuresartသင်တန်း, ဒါပေမယ့်လည်းအချို့သော set ကိုမှာအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြနိုင်ဘူး။ အဘယ်အရာကိုမျှသော်လည်းအတည်ပြုသည်။
စိန်ခေါ်မှုတစ်စုံလည်းaကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်ကိုလူကြိုက်များလိမ့်မည် နည်းပညာ ပြိုင်ပွဲနှင့်က ဟယ်ရီပေါ်တာ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း။ ၏နောက်ဆုံး teased သောအဘို့ကို Lego CON သည်ယခုအချိန်အထိအချို့သောသူများနှင့် တွဲဖက်၍ လက်တွေ့ဘဝအာကာသယာဉ်မှူးနှင့်အင်တာဗျူးတစ်ခုပြုလုပ်သည် CITY အစုံ။ ဒီအဖြစ်အပျက်အတွက်တော့ဒီပုံအတိုင်းအတိအကျဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု Lego CON သည်အဖြစ်အပျက်ပိုမိုနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ဆက်လက်၍ တည်ဆောက်သည် ပထမအရာရှိ Lego CON သည်ဇွန် ၂၆ ရက်ညနေ ၆ နာရီမှည ၈ နာရီအထိ CEST၊ ၅ ညနေ ၇း၇ BST နှင့် 26 နံနက် PST မှဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာထံမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပါလိမ့်မည် တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုး ထို့ကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်လက်မှတ်များကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်စိုးရိမ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်သင်အလိုရှိလျှင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအသေးစားရုပ်ပုံများကို cosplay ပြုလုပ်နိုင်သည်။
← အဆိုပါ Lego အတွက်အသေးစားဓာတ်ပုံများဖြစ်ကြသည် Jurassic World 2021 အစုံ?
Lego Speed Champions 76902 McLaren Elva တွင်ဝှက်ထားသောအီစတာဥရှိသည် →